Nchịkọta Google Na-akwado Akwụkwọ na Webmasters | Martech Zone
Anyị na-ele anya na akaụntụ ndị ahịa webmasters anyị. Ọ bụghị ihe ndabara, n'uche m, na ndị ahịa anyị kwubiri nke ọma ebe anyị nwere ike ịchọpụta ma belata njehie ndị na-apụta na Webmasters. Google na-aga n’ihu n’ihu n’iru algọridim ya karịa gafere na eziokwu egwuregwu na ọtụtụ SEO ụlọ ọrụ na-egwuri egwu n'oge gara aga. Ndị na-ede akwụkwọ na-arụ ọrụ na-eto eto na nke a.
Site n'iji usoro ndi mmadu eme ihe na ndi mmadu, Google na-eme ka ha nwekwuo algorithm ma meziwanye ogo nke nsonaazụ site na obughi nani uzo ndi ozo, kamakwa ndi mmadu na ndi mmadu. Ha na-ewerekwa ya nke ọma.
Taa, anyị natara akwụkwọ a mara mma na Webmasters. Ọ bụ oge mbụ anyị hụrụla… Webmasters na-arịọ ka ihe onwunwe njikọ peeji Google+ ha na akaụntụ Google+ ha:
Nke a bụ ezigbo akụkọ ma anyị mekwara onye ahịa anyị ozugbo ka ọ kwado njikọ ahụ! E nwere ịmụtakwu njikọ na ozi na-arụtụ aka na nke a Nchọta Ime Na Google peeji nke nwere blurb ndị a:
Ọ dị ugbu a karịa mgbe ọ bụla ka ndị mmadụ jikọta gị ma ọ bụ azụmaahịa gị na Google. Ndị mmadụ nwere ike ịchọta profaịlụ na Google na-ewu ewu ma na-etinye aka n'akụkụ aka nri nke nsonaazụ mgbe ọ dị mkpa na ọchụchọ ha. Maka ụfọdụ ọchụchọ, dị ka aha otu ndị na-ewu ewu, anyị nwere ike igosi peeji Google+ ahụ.
Ọ dị ka nsonaazụ nke ijikọ ha abụọ bụ akụkụ dị egwu dị egwu ewepụtara na peeji nke nchọta ihe nchọta ọchụchọ mgbe ịchọrọ akara gị:
Nwelite: Onye nyocha SEO anyị chọtara mkpirisi ọzọ… nkọwapụta na na-eme njikọ site na Google+ ka Webmasters site na Google+. Nke a na-ekpori ndụ!
Tags: onye edemedegoogle plusgoogle + profaịlụsearch resultswebmastersngwa webmasters
vinyl akwụkwọ mmado
Ọkt 24, 2012 na 5:57 PM
Yabụ isi ihe abụghị njikọ ụlọ ọhụụ yana ihe dị mkpa iji lekwasị anya na mgbasa ozi mmekọrịta kama ịkwalite njikọ nke nwere ike ibute mmetụta na-adịghị mma kama ịkwalite gị elu.